Ny fanombohana Ramallah dia mampiasa algorithms haminany ny fifandonana Mideast
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Palestine » Ny fanombohana Ramallah dia mampiasa algorithms haminany ny fifandonana Mideast
RedCrow avy any Ramallah dia tsy manana baolina kristaly. Saingy nandritra ny telo taona farany dia nanaporofo ny fahombiazany ny fanombohana amin'ny faminavinana ny fifandirana ao Moyen Orient amin'ny alàlan'ny algorithman ana tompony. Io data io dia tena sarobidy amin'ireo orinasam-panjakana tsy miankina, masoivohon'ny governemanta ary olon-tsotra maniry ny hanao drafitra ao anatin'ny tontolo politika tsy milamina ao amin'io faritra io, ary tsy hanao ratsy.
Niorina tamin'ny volana Aogositra 2014 ny mpandraharaha Palestiniana Hussein Nasser Elden sy Laila Akel, RedCrow dia nalaina ho sehatra an-tserasera manome faharanitan-tsaina momba ny faritra mafana ara-politika ao Moyen Orient. Nanomboka tamin'ny Banky Andrefana, ny orinasa tsy miankina ankehitriny dia mandrakotra ny fivoarana ao Jordania sy Egypt ihany koa. Ireo mpampiasa farany dia mahazo fampahalalana momba ny filaminana eo noho eo amin'ny alàlan'ny findainy, amin'ny alàlan'ny fampiharana an'i RedCrow. Ny data dia ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra mizara roa, mifototra amin'ny toe-java-misy eo amin'ny fiarovana. Ohatra, azo antoka ve ny mitondra fiara amin'ny toerana iray amin'ny toerana iray hafa? Ny rindrambaiko an'ny RedCrow dia manome sarintany misy antsipiriany mampiseho ny toerana misy ny tranga fiarovana; fifandonana sy diabe ara-politika. Ny rindranasa aza dia mitatitra ny antsipiriany toy ny olona mikorontana ara-tsaina hita mihazakazaka eny amin'ny arabe.
"Ny rafitray dia miorina amina andiana algorithma hahazoana antoka fa marina ny fampahalalana nomena," hoy i Elden, CEO an'ny RedCrow 31 taona, tamin'ny The Media Line. Manara-maso sy manangona ny vaovao sy ny vaovao avy amina loharanom-baovao misokatra ny algorithms, ao anatin'izany ny media sosialy sy ny famintinana tranokala manankarena (RSS) - endrika iray handefasana atiny web miova tsy tapaka, hoy ny fanazavany.
Manangona angon-drakitra tsy tapaka, manova ny vaovao sy vaovao ho lasa sari-tany havaozina hatrany ny rafitra. Mitovy amin'ilay fampiharana Waze malaza be dia be, RedCrow dia mampiseho ny toerana misy ny tranga tsirairay, ary koa ny statistika sy ny fampandrenesana an-tsoratra, ahafahan'ny mpamily mivezivezy manodidina ny olana toy ny sakana arovana na ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
RedCrow dia samy manana mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena ao anatin'izany ny Amideast, Care ary Hemaya.
“Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary mangarahara kokoa ny fahamarinan'ny fampahalalana natolotr'i Redcrow. Ohatra, ny fampiharana dia mampiseho hoe firy ny loharanom-pahalalana nanamafy ny fampahalalana rehetra nalefa tamiko, ”hoy i Ziad Abu Zayyad, mpanjifa ankehitriny ao amin'ny RedCrow tamin'ny The Media Line. “Saika haiko avy hatrany ny zava-nitranga rehetra tao amin'ny Banky Andrefana sy ny lemak'i Gaza. Ny serivisy dia mametraka ny mombamomba anao amin'ny toerana tokana ho anao fa tsy izaho mitady izany. ”
Na dia feno vaovao sandoka aza ny media sosialy, RedCrow dia manivana azy, arakaraka ny loharanom-baovao marim-pototra toa ny kaonty Facebook na Twitter ofisialy, ary ireo mpikatroka politika matoky. Toy izany koa, ny orinasa dia mitatitra fotsiny momba ny fivoarana izay hitan'ny olona marobe tamin'ny ora sy toerana iray. "Ankoatry ny fanomezana fampahalalana momba ny fiarovana eo noho eo, RedCrow dia manome sarintany fampahalalana momba ny fiarovana maharitra. Ho an'ny faritra sasany, manampy ny tompona orinasa handray fanapahan-kevitra stratejika izany, ”hoy i Elden.
Matetika, ireo tatitra ireo dia misy ny vaovao tsy dia nitatitra momba ny endrika tsy ara-politika, ary ny fanadihadiana ny hevitry ny besinimaro.
“Rehefa niseho ny Lohataona Arabo dia azoko antoka fa ilaina ny mombamomba ny filaminana. Nila sehatra iray izahay hanomezana zava-misy sy vaovao momba ny fiarovana, ”hoy i Elden. “Mitanila ny fampahalalam-baovao. Mampiseho sy manafina tantara mifototra amin'ny fandaharam-potoana. ”
RedCrow's Mass Media dia manangona vaovao avy amin'ny fantsom-baovao nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena. Anisan'ireo tranonkala marobe, masoivohom-baovao sy bilaogy manara-maso tsy tapaka azy ireo i Haaretz, Ma'an, Alray ary ny Israel Defense Forces. “Manaparitaka vaovao amin'ny faritra samihafa ny Media Mass, ary tsy misy afa-tsy vaovao mifandraika amin'ny filaminana mifototra amin'ny toerana misy ny mpampiasa farany” Laila Akel, mpiara-manorina ny RedCrow no nilaza tamin'ny The Media Line.
Ny orinasa dia manana firaketana an-tsarimihetsika amin'ny fanatsarana ny fisian'ny virtoaly an'i "Palestine". Ohatra, taloha, ireo mpikatroka mafàna fo dia miampanga an'i Google fa mamafa ny "Palestine" amin'ny Google Maps. Niteraka tenifototra #PalestineIsHere io. Fa toa, "Palestine" dia tsy nasiana marika mihitsy tamin'ny voalohany.
“Mbola tsy nisy marika hoe 'Palestine' tao amin'ny Google Maps. Hitanay anefa ny bibikely izay nanala ireo marika ho an'ny 'West West' sy 'Gaza Strip'. Miasa haingana izahay hamerina ireo marika ireo any amin'ilay faritra ”, hoy ny mpitondra tenin'i Google iray nandefa. Amin'ny fampiasana ny sosona Google map ho an'ny West Bank ho toy ny base, RedCrow dia nanampy mari-toerana sy toerana manan-danja hananganana sarintany azo antoka sy mampahalala.
Ny ekipan'i RedCrow, izay natomboka tamin'ny telo, dia nitombo ho mpiasa 13. "Ny tetik'asa hataonay dia ny handrakotra ny Moyen Orient amin'ny roa taona ho avy," hoy i Akel.
Nahazo fampiasam-bola avy amin'ny Ibtikar Fund i RedCrow - orinasa iray renivohitra izay manangona vola amin'ny fanombohana Palestiniana.
"Ibtikar Fund dia nanambola tamin'ny RedCrow noho ny vokatra sarobidy sy tena ilainy ary ny ekipa efa za-draharaha," hoy ny mpitondra tenin'ny Tahiry Ibtikar tamin'ny The Media Line. "Ibtikar dia hanohy hiara-hiasa amin'ny ekipa RedCrow rehefa mamokatra vokatra sy serivisy fanampiny ary manitatra ny faritra."